နီးခြင်း ဝေးခြင်းဆိုတဲ့ ခံစားမှုကို ပေးတတ်တဲ့ အရောင်တွေ
နွေးထွေး အေးစက်ခြင်းကို ပေးတတ်တဲ့ အရောင်တွေ
အတွေးဟာ ကျဉ်း လိုက် ကျယ်လိုက်
စိတ်တွေဟာ အရောင်နဲ့အတူ တွေးလိုက် ငေးလိုက်….။
စိတ်တွေဟာ လောကကြီးနဲ့ တစ်သားတည်းကျချင်သလိုလို
ခွဲထွက်တဲ့ အရောင်လေးတွေအပေါ် တွေးလိုက်တိုင်း
အရောင်တွေက ခံစားမှုကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်တတ်တယ်
ခံစားမှုနဲ့ အရောင်တွေကို တွေးတယ်…။
အရောင်တွေ ပေးတဲ့ feeling
အရောင်တွေက ခံစားချက်ကို မွေးဖွားပေးတာလား
စိတ်တွေက အရောင်တွေအပေါ် ခံစားပေးတာလား…..။
ငေးလိုက်တိုင်း ရင်ထဲမှာ လွမ်းပြီး ကျန်ခဲ့တဲ့ အရောင်တွေ....
ဘယ်ချိန် ကြည့်ကြည့် နွေးထွေးချိုမြနေတဲ့ အရောင်တွေ....
ဘယ်ချိန် ကြည့်ကြည့် စိတ်ထဲက ဗလာ ရောက်လာတဲ့ အရောင်တွေ....
စိတ် ရဲ့ အရောင်တွေ....
အတိတ် ရဲ့ အရောင်တွေ...
နမိတ် ရဲ့ အရောင်တွေ...။
အချိန်ကာလနဲ့အတူလည်း စကားတွေ ပြောတတ်ပါရဲ့...
အချိန်ကာလနဲ့အတူ အရောင်တွေ ပြောင်းတတ်ကြပါရဲ့။
ငယ်ငယ်တုန်းက ခြယ်မှုန်းခဲ့ဖူးတာတွေက သိပ်ကို စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ခဲ့ဖူးမယ်
ဖူးပွင့်ဖို့ အရှိန်ယူခါစ အရွယ်ဟာ သိပ်ကို တက်ကြွလွန်းတာလဲ ပါလိမ့်မယ်..
ကိုယ့် အရောင်လေးတွေကို ကိုယ်ပြန်ကြည့်ရင် ကျေနပ်မိကြမယ်
ကိုယ့်အရောင်ဆိုတာကလည်း ကိုယ်ပဲ စပ်ဟပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါလားလေ
ဘ၀ကို အရောင်တွေက သိပ်စကားပြောနေတာလား...။
တန်ပြန် သက်ရောက်မှုမှာ အရောင်တွေ ပြောင်းတတ်ကြပါတယ်...
မုဆိုးနားနီး မုဆိုး၊ တံငါ နားနီး တံငါပေါ့လေ...
ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း အရောင်တွေ ပြောင်းတယ်
စိတ်တွေကလည်း အရောင်တွေ ပြောင်းကြတယ်
ရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့ အလင်းတန်းကို လက်ခံခြင်းဟာ အရောင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ သက်ဆိုင်မှာပါ
သေချာတာကတော့ အရောင်တွေ ပြောင်းကြတယ်....။
ဒါဟာ... လိုအပ်မှုကို ပြန်လည်မွမ်းမံနေတာလား
မသိလိုက် မသိဖာသာ အရောင်ပြောင်းနေကြတာလား
သေချာ ရေရာဖို့ ဝေခွဲ သဲကွဲဖို့ လိုနေမှာပါ....။
ကိုယ် နေထိုင်တဲ့ ဟင်းလင်းခွင်တစ်ခုအထဲမှာ ရှိတဲ့ အရောင်တွေကို လှမ်းကြည့်တော့ အတွေးတွေ များရတယ်...။ တကယ်ပါပဲ... ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာ အရောင် သိပ်စုံတယ်.. စိတ်ကူးတွေ ဆိုတာ အရောင် သိပ်စုံတယ်...လေ။ ပထမ ကဗျာကတော့ MTZO ကြီးကို လက်ဆောင်ပေးတာပါ...။ ဒုတိယ ကဗျာကတော့ မ KPZ အတွက်ပေါ့... ။ ဘာကြောင့်လဲတော့ ထွေထွေထူးထူးမရှိပါဖူး။ သိကြမှာပါး)
Posted by ဂျွန်မိုးအိမ် Labels: ကဗျာ_အတွေး, လက်ဆောင်
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ကတော့ သိပ်စူးရဲတောက်ပတဲ့အရောင်တွေကို မကြိုက်ဘူး
ဥပမာ အနီ လိမ္မော်
ဘယ်တော့မှ မ၀တ်ဖြစ်တဲ့ အရောင်တွေ
အကြိုက်ဆုံးကတော့ အစိမ်း၊ အပြာ၊ ခရမ်း
ခုချိန်ထိတော့ ဒီအကြိုက်တွေက မပြောင်းသေးဘူး
all colors have their particular meanings.
for me, just feel about their meanings.
Thanks again for feeling together with me.
(btw, at office, i cn't type mm font, so so :P)